Indlela Yokuqala Ukufuya izinkomo zobisi
Isici sokuqala sokubheka lapho uqala ipulazi lezimbuzi kukhetha uhlobo olufanele lwemibandela yangakini. Ingabe isimo sezulu siyashisa noma kubanda? Ingabe unayo i-quality quality feed etholakalayo, unayo izindlu zezinkomo zakho futhi kukhona izifo eziningi zezinkomo kule ndawo. Ukukhetha uhlobo olufanele lokulima ubisi kubalulekile ukuqinisekisa izilwane eziphilile, isivuno esihle nenzalo eqinile ezohlala isikhathi eside.
Indlela Yokukhetha Uhlobo
Ngakho-ke, ukuzalwa okumele kusetshenziselwe ukukhiqiza ukuhweba kuxhomeke ekuthandweni komuntu siqu, izici zemvelo ezifana nezimo zezulu, ukudla okutholakala kanye nemikhiqizo ekupheleni kisi, isibonelo uma ufuna ukuthengisa ubisi noma ukufuna ushizi. Isibonelo, abacubungula ukukhiqiza ushizi bakhetha ukusebenzisa ubisi obukhulu emanzini obisi (amafutha kanye namaprotheni) akhiqizwa izinkomo zaseJersey. Imikhiqizo ephakeme yobisi ekhishwa izinkomo zaseHolstein ifaneleke kakhulu imikhiqizo yamanzi, njengobisi noma i-yogurt.
Ngumuphi Uhlobo Lwezinkomo Zobisi Oluzokhethwa?
Izinkomo eziningi zingabeliswa ukuze zisetshenziswe ekhaya kodwa ukulima kwezolimo eNingizimu Afrika, kunezinkomo ezine zezinkomo eziyizinkomo zobisi ezikhethekile. Lezi izi:
Holsteins - kusukela enkambeni yaseDutch Friesian
Ayrshires - evela eScotland
Jerseys - kusukela eJersey Isles phakathi kweNgilandi neFrance
Guernseys - kusukela e-Guernsey Isles phakathi kweNgilandi neFrance
Izinhlobo ezincane zobisi zibandakanya i-Brown-Swiss kanye ne-Milking Shorthorns. Ezinye izinhlobo zaseYurophu ezizinhloso ezimbili, ezitholakala emzalweni we-Simmental, nazo zizobanjelwa eNingizimu Afrika njengamanje. Lezi zihlanganisa Fleckvieh, Montbéliarde and Abondance ezivela eJalimane, eFrance nase-Italy, ngokulandelana. Ezinye izinhlobo ezikhona zaseYurophu ziyiNormandé (eFrance) nezinhlanga ezibomvu zaseScandinavian njengeSweden Red and Norwegian Red.
Kwamanye amazwe, izinhlanga zendawo - ikakhulukazi izinhlobo zeZebu zisetshenziselwa ukukhiqizwa ubisi. Ukukhiqiza ubisi lwezinkomo ezivela ezizweni zendawo kuncane kunalokho okwenziwa yizici zobisi ezikhethekile kodwa bavame ukuphila isikhathi eside. Lokhu kungenxa yekhono elingcono lokuzala, ukuqina ngokwengeziwe, nokubhebhethekisa kangcono izimo zendawo ezifana nokubekezelelana nokushisa nokucindezela okukhulu kwezifo.
Imikhiqizo engenisiwe idinga izimo zokuphila ezingcono, ezifana nomthunzi noma izindawo zokuhlala kanye nokudla okungcono kwekhwalithi. Ngenxa yezinkinga zokuzivumelanisa nezimo phakathi kwezihlobo zobisi ezikhethekile kanye nezinhlanga zendawo zithandwa. Isibonelo, eNew Zealand inkomo ye-Kiwi yasungulwa ngokusebenzisa uhlelo lwe-criss-cross breeding usebenzisa ama-bulls ase-Holstein naseJersey.